फागुन १२ गतेदेखि १८ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल
HOME » फागुन १२ गतेदेखि १८ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल
डिसी नेपाल , १२ फाल्गुन २०७४
यो साता राम्रो नै रहनेछ । कुराकानीको भरमा कामहरु मिलाउन सकिने छ । तपाँईको बोलिको प्रभाव बढ्नाले अरुले प्रशंसा गर्ने छन् । भोजभत्तेरमा सहभागी भई मिष्ठान्न भोजन पनि गरिनेछ । आफुले नेतृत्व लिएको कामलाई पुरा गर्न परिवार तथा साथीभाइले सहयोग गर्नाले आत्मविश्वास बढ्ने छ। लाभको मात्रा बढ्नाले पेशाकर्मीहरुले समेत राहत महशुस गर्ने छन् । बढेको आम्दानीले घरमा आवश्यक महशुस गरिएका सर(सामानहरु किनिने छ । मनोरञ्जनात्मक कुरामा खर्च बढ्ने छ । समय परिस्थितीले अरुसंग बदलाको भाव नलिंदा राम्रो हुनेछ । सोचे अनुरुपको सफलताको लागि भने केहि समय पर्खनु राम्रो हुनेछ।
साता राम्रो नै रहनेछ । २-३ दिन आफुले सोचे अनुरुप सानोतिनो काम हुनाले राहत महशुस गरिए पनि ठुला कामहरु सजिलै गर्न सकिने छैन । आफूले गर्नु पर्ने कामको दायीत्व बढनाले दिकदारी महशुस गरिनेछ । आफूले सामान्य ठानेको काममा अनेक समस्याको सामना गर्नु पर्ने छ । कामको बोझ भन्दा प्रतिफल र पुरस्कार कम पाईनेछ । तापनि पदोन्नतिको संभावना प्रबल रहेको छ । लाभ र मान(सम्मान केहि मात्रामा बढ्नेछ । घरका महिला सदश्यहरुको स्वास्थमा केहि समस्याहरु आउन सक्ने हुनाले सतर्क रहनु होला छन । जीवनसाथी संग २(३ पछि मनमुटाव हुनसक्ने हुनाले क्रोधको नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ ।
आईतबार देखि यो साता राम्रो रहने छ । आम्दानीको मात्रा बढाउन गरिएको कोशिस केहि मात्रामा सफल हुनेछ । समयले केहि साथ दिनाले व्यापार व्यबसाय सम्हाल्ने मौका मिल्नेछ । तापनि सोचे भन्दा बढि मेहनत नगरे सफल भईन गाह्रो पर्नेछ । साझेदारीमा केहि असहज परिस्थिती उब्जन सक्ने हुनाले आफ्नो कुरा पहिले नै प्रष्ट गर्दा राम्रो हुनेछ । आफ्नो कमजोरीलाई लुकाउन छुच्चो बोल्दा आफैलाइ नोक्सान पर्न सक्नेछ । बढेको खर्च धान्न लाभका क्षेत्र बढाउने कोशिस गर्दा राम्रो रहला । खानपानमा सजग रहन सकेमा पेटका बिकारले दुख दिने छैन ।
साता सामान्य रहने छ । शुरुमा आफुले सोचे अनुरुप नै कामहरु पुरा हुनेछन । मन मोजमज्जामा बढि जानाले खर्च केहि बढ्ने छ । ब्यपार व्यबसायमा बाधा अड्चनहरु आउनाले दिकदारी महशुस गरिने छ । सरकारी दण्ड जरिवानामा परिने संभावना भएकोले सावधान रहनु जरुरी छ। सरकारी कर, महशुल आदिमा जरिवाना तिर्नु पर्ने हुनसक्छ । सरकारी संयन्त्रबाट सोचे अनुरुप सहयोग पाईने छैन् । पैत्रीक जमीनमा पनि केही खिचलो हुनसक्ने छ। आम्दानीको स्थिती राम्रै रहने छ । अप्रत्यासीत लाभ पनि हुन सक्ने छ । साताको शुरुमा खर्च पनि बढ्ने छ ।
यो साता कामका हिसाबले राम्रै बित्नेछ । जिम्मा लिएको काम पुरा गर्न र लागानी जोगाउन कडा प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्नेछ । व्यबसाय बिस्तारका लागि लगानी बढाउन सकिने छैन । व्यापार व्यबसाय लाभ लिन बढि नै मेहनत गर्नु पर्नेछ । कामको बोझ बढेको तर लाभ सोहि अनुरुप नबढेको महशुस हुनेछ । तापनि समयले साथ दिनाले केहि अचल सम्पति जोडिने छ । आम्दानी केहि बढ्नेछ भने नसोचेको अवस्थामा खर्च गर्नु पर्ने परिस्थिती बन्नेछ । सन्तान शिक्षादिक्षामा केहि समस्या आउनेछ । जीवनसाथी संग मतभेद तथा मनमुटाब बढ्ने छ । खानपान नमिल्नाले पेटमा समस्या आउन सक्ने हुनाले सावधान रहनुहोला ।
साता उत्साहजनक रुपमा बित्नेछ । बाधा अडचन आए पनि बचत तथा अचल सम्पति बढ्नेछ । आम्दानीका स्रोतहरुलाई दिगो बनाउने प्रयास गरिनेछ । तपाँईका प्रतिस्पर्धी तथा बिरोधिहरु आफैं निस्तेज भएर जानेछन । अचल सम्पतिमा ऋणपान गरेर भए पनि लागानि गर्ने कोशिस गरिनेछ । यसले भबिश्यमा प्रतिफल पनि राम्रो नै दिनेछ । तपाँईका शत्रुहरु आफै पराजित हुनेछन । धर्मकर्ममा भने मन जाने छैन । पुराना बुढापाकाको सर-सल्लाहले जीवन मार्ग दर्शनमा टेवा मिल्नेछ । जीवनसाथीको कमजोर मनस्थिती र स्वास्थले केहि चिन्ता दिनेछ । खर्चको घटाउन राम्रै कोशिस गर्नु पर्नेछ ।
आईतबारबाट साता राम्रै बित्नेछ । शैक्षिक क्षेत्र सम्बन्धि व्यबसायीका लागि यो समयले अपेक्षित लाभ दिनेछ । नयाँ लगानी गर्ने अवसर आउने छ। तर जता पनि सफल नभईने हुनाले आफूखुसी लगानी नगर्दा राम्रो हुनेछ । आफ्नो जिद्धिले लगानी गरेमा प्रतिफल सोचे अनु?प हुने छैन भने लगानी पनि डुब्न सक्नेछ । सम्बन्धित क्षेत्रका बिज्ञ तथा पारिवारिक शुभ चिन्तकह?को सल्लाहमा काम गर्दा फाईदा हुनेछ । पेशाकर्मीह?का लागि समय राम्रो छ भने पदोन्नतिका लागि बढि मेहनत गर्नु पर्नेछ । तर कुनै स्थानान्तरण हुने अवसर खोजिरहनु भएको छ भने सो सजिलै प्राप्त हुनेछ । सन्तान स्वास्थमा केहि गडबडी हुनाले चिन्ता महशुस गरिनेछ । घाँटि तथा पेटको स्वास्थ प्रति सचेत रहने कोशिस गर्नुहोला ।
शु?मा साता उत्साहपूर्ण नै लागे पनि आईतबार र सोमबार नैराश्यता अनुभव हुनेछ । आफ्नो कमजोरीले गर्दा अ?ले फाईदा उठाउने छन । घरको पारिवारीक वाताबरणमा अ?को कुरा सुन्नाले केहि तनाव हुनेछ । तर समयले साथ दिनाले महत्वाकांक्षा पुरा गर्ने कोशिस गरिने छ । आफ्ना प्रतिस्पर्धी प्रति बदलाको भावना आउन सक्ने र सो कुराले आफैंलाई हानी हुने हुनाले नम्र बन्ने कोशिस गर्नु बेस हुनेछ । अचल सम्पतिमा भविश्यमा राम्रो प्रतिफल आउने गरि लगानीका अवसर पाईनेछ । सन्तानह?को बिदेशमा पठनपाठन गराउने अवसर जुटनेछ । आम्दानीको पाटो राम्रै रहनेछ । तर खर्च बढ्नाले मनमा केही असन्तोस पनि रहनेछ ।
साताको शु?मा उच्च मनोबल अनुभव गरिने छ तर मंगलबार र बुधबार अवसादको अनुभव गरिनेछ । मनमा बिचारह? छिटो छिटो परिवर्तन हुनेछन । मन स्थिर हुन सक्ने छैन भने नकारात्मक सोचाइ बढि आउने छन । रोकिएका कामह? गर्न केहि जाँगर पलाउनाले काम गर्ने वातावरण बन्ने छ तर धैर्य भने गर्नु आवश्यक छ । साथीभाई तथा सहोदरले सहयोग गर्नेछन र काम पुरा गर्न सजिलो हुनेछ । बचत नबढे पनि आम्दानी पनि बढ्ने छ । खर्चको मात्रा अनायास बढ्न सक्ने हुनाले सचेत रहनु ज?री छ । औषधोपचारमा अनायास खर्च गर्नु पर्ने हुनसक्छ । दाम्पत्य सुखका लागि क्रोध नियन्त्रण गर्नु ज?री हुनेछ ।
साता सोमबार देखी राम्रो हुनेछ । मनमा द्वन्द भए पनि व्यापार व्यवसायलाई बिस्तार गर्ने अवसर आउने छ । सम्पतिमा केहि खिचलो भए पनि बोलिको प्रभावमा बचत बढाउने मौका पाईनेछ । समय पुरै अनुकुल नभएको, बोलेको कुराको अरुले गलत अर्थ लगाई मानमर्दन गर्न सक्ने र बेसुरमा बोलिन सक्ने हुनाले सजग रहेर कुराकानी गर्नु राम्रो हुनेछ । साझेदारहरुले कुटिल बेवहार गर्न सक्ने हुनाले सचेत रहनु होला। तापनि साझेदारले गरेर नै काममा सफलता पनि पाईएला । भाग्यले साथ दिनाले थोरै भए पनि बचत भने बढ्नेछ । आम्दानी भने यो समयमा सामन्यत राम्रो नै रहनेछ । शेयरका लगानिकर्ताहरुलाई भने यो समयमा राम्रो फाईदा हुने देखिन्छ । खर्च कम गर्ने उपाय भने तपाँईका लागि चुनौतिपूर्ण हुनेछ ।
साता सामान्य रुपमा बित्नेछ । बुद्धि एकोहोरिनाले गलत निर्णय लिईन सक्ने छ तसर्थ महत्वपूर्ण काम गर्दा पर्याप्त सोच बिचार गर्नु जरुरी हुनेछ । परिस्थितीबस मुर्ख बनिन सक्ने हुनाले होस पुर्वक काम गर्नु पर्नेछ । मन मोजमज्जा तिर जानाले खर्च बढाउने छ । काममा केहि न केहि अफ्ठ्यारोहरु आएता पनि कामको उच्च मुल्याङ्कन हुनेछ । लाभको मात्रा सोचे अनुरुप नै हुनेछ । दिर्घकालिन आम्दानीका स्रोतहरु फेला पर्न सक्नेछन । दिगो र निरन्तर आम्दानीले घरमा बिलासिता तथा मनोरन्जनका साधनहरु जोडिने छन । शेयर ब्यापारीहरु लागि भने यो समय त्यति लाभकारी हुने छैन् । परोपकारी कामहरुमा पनि सहभागी भईने छ । उच्च शिक्षाका लागि समय उपयुक्त छ ।
यो साता औसत रुपमा बित्नेछ । बढेको खर्चको व्यबस्थापनमा समय र बुद्धि खर्चनु पर्नेछ । आफू सफल बन्न कुटनैतिक उपाय लगाउँदा बेस हुनेछ । खराब आचरणका साथीभाई र आफ्नो कमजोरीले गर्दा कुलतमा फसिने जोखिम बढ्नेछ । राज्य पक्षबाट कुनै सर(सहयोग सोचे अनुरुप पाईने छैन् । आफूले गरेको कामको यश अरुले नै लिनेछन । जसले गर्दा काम गर्न अल्छि लाग्न सक्नेछ । जीवनसाथीको स्वास्थ बिग्रन सक्ने हुनाले सचेत रहनुहोला । लाभको मात्रा राम्रै रहनेछ । धार्मीक तथा मांगलिक कार्यमा सहभागी भई आफन्तसंग भेटघाट गरेमा मनको द्वन्द कम होला ।
जोतिषबारे थप जानकारीका लागि तलको ठेगानामा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ:
पहिलो 'भ्वाइस अफ नेपाल' बने सिडि विजय अधिकारी (भिडियो)
सिडी विजय अधिकारी यसरी बने पहिलो भ्वाइस अफ नेपाल, ७ तस्वीरमा हेर्नुहोस
तन्नेरी पुस्ताको अमेरिका मोह : करोेडौँ गुमाएर रित्तै स्वदेश फिर्ता
यसरी घरमै बनाउनुहोस् स्वादिस्ट डुनोट (भिडियोसहित)
यो वर्षको सबैभन्दा धेरै कमाइ गर्ने फिल्म बन्यो ‘२.०’
हनिमुन मनाएर फर्किए प्रियंका–निक, ६ तस्वीरमा हेर्नुहोस
पवित्रस्थलमा हदपार गरि फोटो खिचेपछि 'प्ले बोइ मोडेल' पक्राउ
यसरी छक्काको वर्षात गर्दै बंगलादेशलाई हरायो वेष्टइण्डिजले (भिडियो सहित)
अष्ट्रेलियाविरुद्धको टेस्ट जोगाउन संघर्षरत भारत
एक महिनादेखि सम्पर्कविहिन सुवासको जङ्गलमा शव फेला
हवाई आक्रमणमा सोमालियामा ६२ जना मारिए
प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न, खोई पानीजहाज?